SEENAA BOONSAA KUDHAAMA TOKKUMMAAN AS GEENYEE; SEENAA SUMMII TOKKUMMAATTI TAHU DHALOOTA BORUU HIN DHAALCHIFNU! Caalaa Hayiluu Abaataa irraa, Fulbaana 27, 2019 Waan hardha keessa jirruuf, kaleessi fi dheengaddi waan taphatan qabu. Waan boru tahuuf jiruufimmoo kaleessi fi hardhi waan raacitan qabu.… Read More »
Oduu ODP: Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddi jiru itti fufee jira Note from Admin: Namni “du’a duwwaatu addaan nubaasa” jedhu, amma ammoo Abiyiin haadhe jechuun nama dhiba Via Beekan G Erena ~ Lammaan haga Oromoon hin tokkomne, ADP waliin tokkomuun hin… Read More »
የኦሮሞ ፍልስፍና: የተግባቦት ፍልስፍናዊ ዘዴ (Ilaa fi Ilaamee Philosophic Method of Philosophy), ክፍል ፻ By Yoseph Mulugeta Baba, PhD, September 27, 2019 የተግባቦት ፍልስፍናዊ ዘዴ ሀገር-በቀል ሥነ-ዕውቀታዊ እሳቤ ነው። ይህንን ውስብስብ ፍልስፍናዊ ስልት (philosophical method) በግልጽ ለመረዳት፣ በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞን… Read More »
Saboonumaan Oromoo vs Itiyoophiymmaa ODP diigaa jira Via #Inbox Etana Habte Yeroo dhiyoo asitti hooggansa ODP gidduutti wal qoodiinsi mula’achaa dhufan sadarkaa sodaachisaa irra ga’era. Ka’umsi adda qoodamuu hooggansaas garaagarummaa ejjennoo sabboontummaa Oromoo irratti mul’atedha. ‘Team Lamma’ fi ‘Team Abiy’… Read More »
Oromia Support Group Australia Statement on the brutal killing of Gammachu Garomsa
September 26, 2019 Oromia Support Group Australia extremely shocked about the brutal killing of innocent Oromo young boy Support Group Australia extremely shocked about the brutal killing of innocent Oromo young boy Gammachu Garomsa, (the local… Read More »